Wholesale Soy wakisi girazi inonhuhwirira kenduru fekitari uye vagadziri | Winby
kenduru yesoya wakisi
Soy wakisi girazi inonhuhwirira kenduru
Makenduru edu e soya anogadzirwa neasoni wakisi, zvakaenzana kupisa uye pasina utsi hutema, hutano, husina kukuvadza kune nharaunda yemuviri wemunhu. Mhando dzakasiyana dzemakenduru anonhuwirira, akakodzera chero zviitiko. Zvakare girazi regirazi rakachengeteka uye rinotakurika kushandisa. Isu tinopa ODM OEM vatengi.
Tiri kutarisira kuva wako kwenguva refu naye mu China.
Kukura: Dhayamita 6.2cm * Kureba7.6cm
Diki saizi sosi wakisi girazi inonhuhwirira kenduru
Soy wakisi girazi inonhuhwirira kenduru nemhando yepamusoro, logo uye saizi inogona kugadzirwa. Ipa zvakare sevhisi sevhisi.
Makenduru Anonhuwirira Soy Kwete kungozorodza mweya chete asiwo kudzikamisa tsinga uye kubvisa kushushikana. Inogona kushandiswa kushaya hope, kuyananisa, kubvisa hwema, nezvimwewo kupfuma nekugara kwenguva refu kunhuhwirira kunoita kuti unzwe kugadzikana.
Mashoko Transparent girazi + soya wakisi + simbi muvharo
Saizi D6.3cm * H7.6cm
Nguva yekupisa 16hours
Wax uremu 90g
Huremu hwese 245g
Pashure: 7.8 inch kureba Parafini wakisi mbiru kenduru
Zvadaro: girazi rinoonekera rinonhuhwirira kenduru
Kenduru Soy Wax
Soy Kenduru Wax
Soy Wax YeKenduru Kugadzira
Soy Wax YeMakenduru
yakavanzika chitaridzi inonhuhwirira mini makenduru
Rakaomeswa ruva rakasarudzika dhizaini girazi wakisi fragra ...